Coronavirus: Urdun oo bandowgii ugu adkaa ku soo rogtay shacabkeeda - Worldnews.com
Dowladda ayaa sheegtay in maamullada magaalooyiinka, shirkadaha iyo ganacsiyada ay dadka u geyn doonaan waxyaabaha
"Waxaan gaarsiin doonnaa qof walba iyo guri walba, muddo ka dibna waxaan qeybin doonnaa waxyaabaha kale,"
LONDON, United Kingdom — Qaab nololeedka boqorad waxay malaha xad-dhaaf la tahay dadyowga aan ka tirsaneyn qoyska boqorada, balse marka ay boqorad Queen Elizabeth timaado...
Dowladda UK ayaa qaadday tallaabo dheeri ah oo lagu xakameynayo faafitaanka fayraska corona. Dukaamada iibiya waxyaabaha aan daruuriga ahayn ayaa la xirayaa, sidoo kale...
Wax ka badan labo bilood ayaa ka soo wareegatay markii kiiskii ugu horreeyay ee fayraska corona laga helay Mareykanka. Tan iyo wixii intaa ka dambeeyay, fayraska ayaa ku...
ADDIS ABABA, Ethiopia – Itoobiya ayaa xirtay dhamaan xuduudaheeda si ay uga hortagto faafitaanka COVID – 19, sidda ay warbaahinta dalkaas kasoo xigatay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed. Wargeyska Addis Standard ayaa baahiyey in sidoo kale Abiy uu amray in la karan-tiilo dhamaan dadka galaya gudaha waddankaas laga bilaabo maanta oo Isniin ah, 23-ka Maaj, sanadka 2020. Sidda ay...
Coronavirus: Dhakhaatiir hawlgab ah oo laga codsaday inay soo gurmadaan
Waaxda daryeelka caafimaadka UK ayaa waraaqo u dirtay in ka badan 65,000 oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal howlgab noqday, iyadoo ka codsaneysa inay ku soo laabtaan shaqada si ay uga qeyb qaataan la dagaallanka fayraska corona. Dhanka kale, dowladda ayaa codsatay in dhammaan isbitaallada la geeyo qalabka loogu talogalay la dagaallanka cudurkaasi. Dalka UK, 144 qof ayaa fayraska...
Sacuudi Carabiya ayaa joojisay in gebi ahaanba salaaddaha jamaacada lagu tukado gudaha iyo bannaanka labada masjid ee barakaysan ee ku kala yaalla Maka iyo Madiina si loo yareeyo faafitaanka coronavirus. Go'aankan lagu joojiyay salaadaha jamaacdaha ee Masjidka Xaramaynka iyo Masjid an-Nabawi, ee ku kala yaalla Maka iyo Madiina ayaa lagu sheegay mid ku meel gaar ah. Mar sii...
"Go\_'aano" laga soo saarey doorashooyinka Soomaaliya ee 2020-21
MUQDISHO, Soomaaliya – Madasha Xisbiyadda Qaran ee Soomaaliya ayaa war cusub waxay kasoo saartey doorashooyinka aan wali lagu heshiin nidaamka lagu galayo ee la qorsheeyay in ay dhacaan 2020-21. War-saxaafadeed ayay ku shaaciyeen in muhiim ay tahay in coddeynta ay waqtigeeda ku dhacdo, iyagoo meesha ka saarey waqti ku darsi ay sameysato dowladda uu hogaamiyo Farmaajo....
Gigada diyaaradaha Mareykanka oo saxmad la ciirciiraya
Dadka ka soo safray Yurub ee Mareykanka soo galaya saacado waxay ku jirayaan safaf dhaadheer inta laga hubinayo xaaladdooda caafimaad. Gigaa diyaaradaha Mareykanka intooda badan inta ay gaarin laanta socdaalka waxay marayaan baaritaan dheer oo saacada qaadanaya. Dhibaatada rakaabka Yurub lagu hayo awgiina wasaaradda arrimaha dibadda waxay muwaaddiniinteeda kula talisay iney u...
Wa cusub oo kasoo kordhay ismari waaga dhismaha biyo-xireenka Wabiga Nile ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay ku gacan seyrtay dalab uga yimid dhinaca Masar oo ah inay billaabaan howsha la xiriirta qodista biyo-xireenka, kaasoo ilaa hadda la dhameystiray boqolkiiba 70. Waxaa biyo-xireenkan laga sameynayaa wabiga loo yaqaanno Blue Nile oo u dhow xadka ay wadaagaan dalalka...